Khin Maung Chin: ချစ်မိသွားပါသဖြင့် ၆
ဟိုရောက်တော့ခင်လေးနွယ်ကအိမ်ရှေ့ကမြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာတစ်ယောက်ထဲထိုင်နေတယ်လေ.. ကျနော်လည်းအနားကိုသွားပြီးသူ့ဘေးမှာထိုင်ချလိုက်တော့မှ မျက်ဝန်းတွေထဲကမျက်ရည်တွေကိုကပျာကယာသုတ်ပြီးကျနော့်ကိုရီဝေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ မော့ကြည့်လာတယ်လေ.. ဘယ်လောက်တောင်ငိုထားလဲမသိဘူးး သူ့မျက်ခွံတွေတောင်မို့အစ်နေတယ်ဗျာ..။
'' အဲလိုမပြောပါနဲ့ကိုရယ်..ကိုယ်ဟာနွယ့်အတွက်အနှိုင်းမဲ့ပါ..ခုမလာဘူးဆိုတာကလဲ နွယ့်မှာအခြေအနေအရလက်ထပ်ရမယ့်သူပေါ်လာလို့ပါ.အဲတာကိုရှင်းပြဖို့နွယ်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ကိုရယ်''
ဆိုပြီးကျနော်တောင်းဆိုလိုက်တော့ ကျနော့်ကိုစူးစူးရှရှလေးတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီး ကျနော့်လက်ကိုဆွဲအိမ်ပေါ်ကိုခေါ်
သွားပါတော့တယ်... သူ့မောင်လေးကင်ဆာဝေဒနာရှင်လေးနေတဲ့အခန်းထဲရောက်တော့မှ ရှိုက်ရှိုက်ပြီးငိုပါလေရော.. ကောင်လေးကကျနော့်ကိုခင်တယ်လေ... သူ့ရဲ့အရိုးပေါ်အရေတင်နေတဲ့မျက်နာနဲ့ခန္တာကိုယ်ကိုမြင်တော့ကျနော်ဘယ်လိုမှထိန်းလို့မရတော့အောင်
ဒီလိုသေဘေးနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဆုံနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုမြင်ရင် ဘယ်လိုလူမှဝမ်းမနည်းပဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး..။ ကျနော်ကောင်လေးအနားကပ်သွားလိုက်တယ်ဗျာ..ဖျော့တော့မှေးမှိန်နေတဲ့သူ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ကောင်လေးက
'' မငိုပါနဲ့ကိုကြီးရယ်.. ကျနော်မကြာခင်နေကောင်းလာတော့မှာပါ..
ဆိုပြီးအားမရှိတဲ့ကြားက ကြိုးစားပြိးကျနော့်ကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောနေသေးတယ်လေ... ကျနော်လည်း
'' ဒါပေ့ါငါ့ညီရယ်..ညီလေးနေကောင်းလာတော့မှာပါ..ဒီတော့မှ အစ်ကိုအသစ်ဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်လျှောက်စီးကြမယ်၊ ရေအတူတူသွားကူးကြမယ်..
ဘောလုံးတူတူကန်ကြမယ်နော်.. အစ်ကိုဂိုးစောင့်တဲ့အခါ ဂိုးသွင်းနိုင်အောင်ညီလေးကောင်းကောင်းအားမွေးထားရမယ်နော်ညီလေး .. ကြားလာ? အစ်ကိုညီလေးကိုစောင့်နေမှာပါညီလေးရယ် ''
ဆိုပြီးအားတင်းပြောလိုက်တယ်လေ.. အဲဒီနောက်တော့ဘယ်လိုမှ မဟန်နိုင်တော့တာနဲ့ကောင်လေးအနားမှာထိုင်နေကြတဲ့ နွယ့်မိဘတွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ရှေ့ပြန်ထွက်လာခဲ့တော့တာပေါ့.. နွယ်ကလည်းအတူတူလိုက်လာပြီးကျနော့်ကို
'' မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုရယ်.. နွယ့်မှာဒီမောင်လေးတစ်ယောက်ပဲရှိတာ၊ပြီးတော့မေမေတို့၊
ဖေဖေတို့ကလည်းအသက်ကြီးနေပြီဆိုတော့ခုမောင်လေးဖြစ်နေတဲ့ရောဂါကိုကုသဖို့လုံလောက်တဲ့ အားမရှိဘူးလေ.. ဒီတော့နွယ်လည်း ကို့ကိုသိပ်ချစ်ပေမယ့်မောင်လေးဒီလိုခံစားနေရတာမကြည့်ရက်လို့ အမေရိကားကိုခေါ်သွားပြီးဆေးကုပေးမယ့် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ကို မိဘတွေရဲ့ တိုက်တွန်းချက်အရလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာပါကို.. နွယ့်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါ..နွယ့်ကိုနားလည်ပေးပါ..''
ဆိုပြီး တစ်လုံးခြင်းရှင်းပြတယ်လေ.. ကျနော်တော်တော်ခံရခက်တယ်ဗျာ.. တကယ်တော့ကျနော်လည်းအဆင်းရဲကြီးမဟုတ်ပေမယ့် သူပြောနေသလိုဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ကို အမေရိကားထိသွားကုသပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေ.. အံ့ကြိတ်ပြီးကျနော်အရမ်းချစ်ခဲ့တဲ့နွယ်လေးကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်... သူ့ခမျာလည်းကျနော့်ကိုတကယ်ချစ်ရက်နဲ့ရွေးဖို့လမ်းမရှိတော့လို့ ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲလေ
'' ကောင်းပါပြီနွယ်.. ကိုယ့်မှာနွယ်နဲ့ ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကံတရားကခွင့်မပြုလို့နွယ်နဲ့ကိုယ်ရှင်ကွဲကွဲ လိုက်ရတာလို့ကိုယ်မှတ်လိုက်ပါ့မယ်''
'' အိုခေနွယ်..မငိုပါနဲ့နော်.. ကိုယ်သွားတော့မယ်..နွယ်ဟာနွယ့်မောင်လေးအတွက် အချစ်ကိုစတေးလိုက်ရတာပဲလေ.. ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေကြောင့်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်နွယ်.. ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါနွယ်.ကိုယ်သွားပြီ.''
လို့မေးလာတော့ ကျနော်သူ့ကိုအဖြေတောင်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးလေ. သူလည်းသိတာပေါ့ဗျာ.. ခြေတစ်လှမ်းတစ်လှမ်းကို မလှမ်းချင်သလိုလိုလှမ်းနေရတဲ့ကျနော့်အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး သူမှမဟုတ်ပါဘူး..
''ကျနော်ကရောဘာမှားလို့လဲဆရာရယ်? ကျနော်သူ့ကိုချစ်ပဲချစ်ခဲ့တာပါ..အဲဒါကျနော်မှားတာလားဗျာ. ခုသူကကျနော်မဟုတ်တဲ့နောက်တခြားသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ ကျနော်နဲ့လိုက်မလာနိုင်တာပါ တဲ့ဗျာ.
ကျနော်ဘာအမှားလုပ်မိခဲ့လဲ ပြောပါဆရာရယ် ''
''မဟုတ်ဘူးသီဟ..ဒါတွေအားလုံးဟာအပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကစီမံနေတာတွေပါ..။ မင်းတို့ကိုခွဲပစ်လိုက်တာလဲသူဖြစ်သလို ဟိုးးးအရင်မင်းတို့ကိုတွဲမိစေတာလဲသူပဲသီဟရယ်.. ငါပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လား? ''
'' ကောင်းပြီသီဟ...ငါပြောတာသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်မင်းရင်ထဲမှာဖြစ်နေမဲ့ အာဃာတတွေကို ချေဖျက်လိုက်ပါ..။
ပေးမဖြစ်ပါစေနဲ့..ဒီမှာ သီဟ..တနေရာရာမှာတော့ တစ်ယောက်ယောက်က မင်းအတွက်စောင့်မျှော်နေပါလိမ့်မယ်ကွာ..အဲဒီတစ်စုံတစ်ယောက်ကပဲ မင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ငါယုံကြည်ပါတယ်.''
အဲဒီနေ့ကစပြီးကျနော်ပုလင်းကိုင်မိတော့တာပါပဲ.. ယဉ်ယဉ်လေးပြောရရင်တော့ ယမကာလုလင်ပေါ့...... တိုက်ဂါးက ကျနော့်အဖော်ပေါ့ဗျာ..တိုက်ဂါးမအားရင်အိမ်မှာပဲပုလင်းထောင်တယ်...
တိုက်ဂါးအားရင်တော့ ဘားမှာပေါ့.... လုံးဝမနားပဲနေ့တိုင်းညတိုင်းကိုသောက်နေတော့တာပါပဲဗျာ...
မမကြီးတို့လည်းကျနော့်ကိုစာနာမိပြီးဘာမှမပြောသာပဲ သူတို့ဖာသာသူတို့စိတ်ညစ်နေကြ၊ဝမ်းနည်းနေကြတာပေါ့ဗျာ။ တနေ့ နေ့လည်ထမင်းဝိုင်းမှာယမင်းကကျနော်တို့အိမ်မှာထမင်းလာစားတယ်.. ကျနော်ကတော့ထုံးစံလိုဖြစ်နေတဲ့ဘားကိုရောက်နေတာပေါ့..။ အဲဒီအချိန်မှာယမင်းက မမကြီးကိုဘာမေးလဲဆိုတော့
'' ဘယ်လိုပြောရက်ပါ့မလဲ ယမင်းရယ်. ညကလဲတော်တော်ညဉ့်နက်မှသီချင်းတွေအော်ဆိုပြီးပြန်လာတယ်လေ..
ဆိုပြီး ငိုတော့တာပဲ.. ယောက်ဖလဲမျက်နာမကောင်းဘူး အမွှာနှစ်ကောင်လည်းတိတ်ဆိတ်လို့ပေါ့..
ကျနော့်ကြောင့် အပျော်တွေပျောက်ပြီး ပူဆွေးနေကြတဲ့အိမ်ပူကြီးဖြစ်လာတယ်ပြောရတော့မှာပေါ့...
တရက်အိမ်မှာတစ်ယောက်ထဲပုလင်းထောင်နေတုန်းအမွှာနှစ်ကောင်လာချောင်းတယ်လေ.. ကျနော်ကခပ်မြန်မြန်မူးအောင်ဆိုပြီးပုလင်းလိုက်မော့နေတာကိုသူတို့တွေ့သွားတော့ မီးဖိုချောင်မှာချက်ပြုတ်နေတဲ့မမကြီးဆီကိုသွားပြီး
''မာမီ မာမီ.. အန်ကယ်လ် အရင်ကအရက်သောက်ရင် ခွက်ထဲမှာ
ဆိုဒါရောပြီးမှသောက်တာမဟုတ်လား? '' ဆိုပြီးမေးနေကြတယ်လေ.. အဲဒီမှာမမကြီးက
'' ခုအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးမာမီရဲ့..သူမသောက်တော့ပါဘူး ''
'' ဘာမသောက်တော့တာလဲ? အရက်မသောက်တော့တာလား? ''
'' မဟုတ်ပါဘူးး အရက်မသောက်တော့တာမဟုတ်ပါဘူး ခု ဆိုဒါမသောက်တော့တာကိုပြောတာပါ..အန်ကယ်ကလေ ခုပုလင်းလိုက်မော့နေတာတွေ့ခဲ့တယ်မာမီ.''
ဒီလိုနဲ့ရက်တွေတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ကုန်ပြီး လတောင်ပေါက်ခဲ့တယ်ဗျာ.. တစ်ရက် ကျနော်အိပ်ယာကနိုးနိုးခြင်း အမွှာနှစ်ကောင်ကျနော့်အခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့
'' အန်ကယ်လ်ရေ.ထတော့.. ဒီနေ့တော့မာမီ့အခြေအနေမကောင်းဘူးနော်.. ရေနွေးဆူသလိုပွက်ပွက်ဆူနေတယ်..အဲဒါ အန်ကယ်လ်ကိုကြိုပြောထားတာနော်.''
ဒီအိမ်မှာနေရတာစိတ်ကုန်လာလို့ပြောနေတာ.. ဘာတွေမှန်းမသိဘူး..ညဆိုပြန်လာတာနောက်ကျရတာနဲ့.. ခေါင်းရင်းမှန်းခြေရင်းမှန်းမသိပိုးလို့ပက်လက်အိပ်နေရတာနဲ့.. အိမ်ကအိမ်နဲ့မတူပဲဘာနဲ့တူနေပြီမှန်းကို ပြောရတာတောင်ခက်နေပြီ.''
'' မဟုတ်ရပါဘူးမောင်တော်ကြီးရယ်.ကျနော်မျိုးမရဲ့ယောင်္ကျား.မောင်တော်ရဲ့ယောက်ဖကိုပြောနေတာပါ.. ''
ဆိုပြီးပြန်ချေပတာပေါ့.. ကျနော်သိပါတယ်.သူတို့ကျနော့်ကိုပြောနေကြတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်မိလို့ဘာမှပြန်မပြောပဲ မမကြီးဘာတွေဆက်ပြောမလဲဆိုတာပဲစောင့်နေလိုက်တယ်လေ..
'' ဘာလဲ မိန်းမတစ်ယောက်ထားခဲ့တာနဲ့ဘဝကပြီးဆုံးသွားပြီလား ငါ့မောင်ရဲ့.. မင်းဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမြင်ရအောင်လို့ မေမေတို့ဖေဖေတို့ မင်းကိုငါ့ဆီမှာစိတ်ချလက်ချထားပြီးနောင်တမလွန်ကိုသွားနှင့်ကြတာနေမှာ..
ဒီမှာ.ရှင် ရှင်ဘယ်လိုမှမဆုံးမနိုင်တော့ဘူးလား.. ရှင့်ယောက်ဖဒီလိုနေ့နေ့ညညသောက်သောက်ပြီးမူးရူးနေတာကိုရှင်ဒီအတိုင်းကြည့်နေတော့မှာလား ? ''
'' ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မိရယ်..''
'' ကျမတို့မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကမောင်လေးကငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်လေ..အဲဒီအချိန်တုန်းက အမြင်မတော်ရင်ရိုက်နှက်ဆုံးမသလို ခုနည်းနည်းပါးပါးရိုက်နှက်မှပေါ့ ''
'' ဟာ မိကလဲ..ဟိုတုန်းကသူငယ်တုန်းမို့လို့ပါ..ခုတော့သူ့.....''
'' ဒါဆိုရှင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့..ဟုတ်လားး? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ကစပြီးဒီအိမ်မှာ စိတ်ညစ်တာတွေ၊အသည်းကွဲတာတွေ၊ ဝမ်းနည်းတာတွေ ဘာမှမကြားချင်တော့ဘူး..
ရှိလည်းမရှိရတော့ဘူးး ဒါကြောင့်မနက်ဖြန် Sunday မှာ အိမ်မှာပါတီလုပ်မယ်.. အိမ်နီးနားချင်းတွေကိုဖိတ်ပြီးပြီ..ကကြမယ်၊ ခုန်ကြမယ်.. ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲအရင်လိုပြန်နေကြမယ်..''
'' ကိုယ်တို့တော့စားပြီးပျော်မယ်..သူကတော့သောက်ပြီးပျော်မယ်ပေါ့ ''
'' ဘယ်လိုလုပ်သောက်လို့ရမလဲအစ်ကိုကြီးနဲ့မမကြီးရယ်.. ဒီမှာကိုသီဟအရက်ပုလင်းတွေအားလုံးကျမရှာပြီးယူလာတယ်.''
လို့ပြောလိုက်ရော လန့်ပြီးလွှတ်ချလိုက်သလိုလို၊ ကျနော်ပြောလို့ပဲ
စကားနားထောင်ပြီးချလိုက်သလိုလို ပွေ့ထားတဲ့အရက်ပုလင်းတွေအားလုံးကြမ်းပြင်ပေါ်လွှတ်ချလိုက်တယ်လေ... သွားပြီပေါ့..အားလုံးကွဲကုန်ကြပြီပေါ့ဗျာ.. ကျနော့်မျက်လုံးတွေပြာသွားတယ်ဗျာ.. ကွဲနေတဲ့အသည်းကိုအရက်နဲ့စိမ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကျနော်.. ကျနော့်အရက်ပုလင်းတွေကျနော့်အရှေ့မှာပဲအကုန်ကွဲကြေကုန်တော့...
'' မမကြီး.. ယမင်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးနော်..မတော်တဆဖြစ်သွားတာပါ..ကိုသီဟကိုပြောပေးပါဥိး''
'' ရတယ်ယမင်းရေ...ညီမလုပ်လိုက်တာအရမ်းကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုမို့ ဆော်ရီးတောင်ပြောနေစရာမလိုပါဘူး..လာသွားစို့ ''
ဆိုပြီး ယမင်းလက်ကိုဆွဲလို့ကျနော့်အခန်းကထွက်သွားပါတယ်.. သူတို့နောက်က အမွှာနှစ်ကောင်၊
ပြီးတော့ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ရုပ်ရှင်ထဲကဇာတ်လိုက်တွေလိုမျိုးဟန်ပါပါတွန့်ပြီးယောက်ဖပါလိုက်ထွက်သွားတော့တာပေါ့ဗျာ.. အင်းးဒါလည်းကျနော့်ကိုပုံစံပေးခြင်းတစ်မျိုးပဲဆိုတာကျနော်နားလည်လိုက်ရပါပြီလေ....
ခဏ နားပါဦးမယ်.. လာရောက်ဖတ်ပေးကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
May 20, 2011, 9:13:00 PM
ဇတ်လမ်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်မို့ ခံစားအားပေးလျှက်...ပါ ချင်းလေးရေ..
May 20, 2011, 11:55:00 PM
ဖတ်ရတာ ကောင်းပေမဲ့ . . . နွယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေ ရှိသူမို့ ကိုယ့်ဖာသာ မချိဘူး။
May 21, 2011, 10:16:00 AM
ကိုဇော့်ရင်ထဲကဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ.. ဒါဆိုကျနော့်အထင်ပြောရရင် ကိုဇော်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ နှလုံးသားရှိရာ ဝတ္ထုထဲကမမေနှင်းနွယ်နဲ့ကိုဇော်တကယ်ပဲ ချစ်ခဲ့ကြတာပေါ့... ကျနော်က ကိုဇော်စိတ်ကူးပြီးရေးဖွဲ့ထားတာထင်နေတာ.. လာအားပေးတဲ့အတွက်တော့ ကျေးဇူးပဲကိုဇော်...